मार्केटिंग अटोमेसन प्लेटफर्म खरीदमा कारकहरू Martech Zone
मार्केटिंग अटोमेसन प्लेटफर्म खरीदमा कारकहरू
बिहीबार, डिसेम्बर 29, 2016 Douglas Karr
त्यहाँ धेरै छन् मार्केटिंग स्वचालन प्रणाली त्यहाँ बाहिर ... र ती मध्ये धेरैले आफूलाई परिभाषित गर्छन् मार्केटिंग स्वचालन यसलाई समर्थन गर्ने वास्तविक सुविधाहरूको फरक डिग्रीको साथ। अझै, हामी धेरै कम्पनीहरूले बनाउने हेर्दछौं ठुलो गल्ती या त धेरै धेरै पैसा खर्च गरेकोमा, धेरै धेरै समय वा पूर्ण रूपमा गलत समाधान खरीद गर्न।
मार्केटिंग टेक्नोलोजीको लागि विशिष्ट, हामी विक्रेताको चयन प्रक्रियामा सँधै केही प्रश्नहरू सोध्छौं:
अवसर के हो तपाईले देख्नु भयो कि यसको फाइदा लिन सकिंदैन? के यो पोषण लिड्स हो? स्कोरिंगले बिक्री दक्षता बढाउछ? हालको ग्राहकहरुलाई अपसेल वा कायम राख्न मद्दत गर्दैछ? वा यसले भर्खर तपाईंको टीमको वर्कलोड घटाउँदैछ र केहि मैन्युअल प्रक्रियाहरू स्वचालित गर्दैछ जुन तपाईं हाल प्रयोग गरिरहनु भएको छ।
कुन टाइमलाइन के तपाइँ कार्यान्वयन गर्न र परिणामहरू देख्नु पर्छ? तपाईंको लगानीमा फिर्ताको लागि तपाईं कत्तिको चाँडो उठेर दौडिन आवश्यक छ? सफलता घोषित गर्न ब्रेक-ईन पोइन्ट के हो?
के स्रोतहरू के तपाइँ प्रणाली कार्यान्वयन र प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ? यो एक विशाल एक हो! के तपाइँ व्यक्तित्व अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ? के तपाइँ स्क्र्याचबाट ग्राहक यात्रा विकास गर्न आवश्यक छ? के तपाईंलाई आफ्नो उत्तरदायी ईमेल टेम्प्लेटहरू पनि विकास गर्न आवश्यक छ? उत्पादित एकीकरणले काम गर्दछ वा तपाईंलाई आवश्यक परिणामहरू प्राप्त गर्न अतिरिक्त विकास प्राप्त गर्न आवश्यक छ?
के डाटा के तपाईंलाई सुरू गर्न आवश्यक छ र कसरी तपाईं व्यवहारिक रूपमा खरीद, ग्राहक, र अन्य डाटा अपडेट रूपमा प्रभावी रूपमा सार्न र ग्राहक यात्रा डेटा अपडेट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? गलत प्रणाली र तपाईंले आफ्ना श्रोतहरू सुक्खा पाउनुहुनेछ केवल प्रणाली बीच डाटा परिवर्तन र लोड गर्न कोशिस गर्दै।
के लगानी तपाईं बनाउन सक्नुहुन्छ? यो केवल मञ्च लाई इजाजतपत्र छैन, यसले सन्देश लागत, सेवा, र समर्थन, सामग्री विकास, एकीकरण र विकास लागत, साथै कार्यान्वयन, मर्मत, परीक्षण र अप्टिमाइजेसन लागत।
औंठाको नियमको रूपमा, हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई उनीहरूको ग्राहकहरूको यात्राको नक्शा दिन आग्रह गर्दछौं।
अधिग्रहण - प्रत्येक उत्पादन र नेतृत्व को प्रत्येक स्रोत को लागी, एक यात्रा के छ कि एक संभावना एक ग्राहक बन्न लाग्छ? परम्परागत संसाधनहरू, रेफरल संसाधनहरू, र अनलाइन संसाधनहरू समावेश गर्नुहोस्। तपाईं कुन प्रक्रियाहरू सबैभन्दा कुशल हो हेर्न सक्नुहुनेछ, सब भन्दा बढी राजस्व चलाउनुहोस्, र पैसाको कम्तिमा खर्च गर्नुहोस्। तपाईं मार्केटिंग अटोमेसन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ उत्तमको भोल्यूम बढाउनको लागि वा सबैभन्दा असक्षम तर लाभदायक यात्राहरूको लागि प्रक्रिया स्वचालित गर्नुहोस्।
अवधारणा - प्रत्येक उत्पादनको लागि, यात्रा के हो जुन एक ग्राहक रहन वा एक ग्राहकको रूपमा फिर्ता लिन लाग्छ? मार्केटिंग अटोमेसन प्रणाली अवधारण वृद्धि गर्न आश्चर्यजनक उपकरण हुन सक्छ। तपाईं अनबोर्डिंग अभियान, प्रशिक्षण अभियान, प्रयोगमा आधारित ट्रिगर अभियान, र अधिक बढि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यी प्लेटफर्महरूले तपाईंलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई हल्का नठान्नुहोस् राख्नु राम्रो ग्राहकहरु
अपसेल - तपाइँ कसरी तपाइँको ब्रान्ड मा ग्राहकहरु को मूल्य बढाउन सक्नुहुन्छ? त्यहाँ थप उत्पादन वा अवसरहरू छन्? तपाईं कति ग्राहकहरूसँग छक्क पर्नुहुनेछ जुन तपाईंसँग प्रतिस्पर्धीहरूसँग पैसा खर्च गर्दैछ किनभने उनीहरूले तपाईंले के प्रस्ताव गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा महसुस गरेनन्!
प्रत्येक यात्रा भित्र, अब नक्शा बनाउनुहोस्:
कार्मिक र लागतहरू - तपाइँको बिक्री र मार्केटिंग कर्मचारीहरु को लागी प्रत्येक योग्य नेतृत्व र प्रत्येक ग्राहक हासिल गर्न को लागी लागत छ?
प्रणाली र लागतहरू - कुन प्रणालीहरू छन् जहाँ डाटा भेला गरिएको छ?
अवसर र राजस्व - प्रत्येक यात्राको लागि लक्ष्य वृद्धि के हो र कति यति अतिरिक्त राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ स्वचालित र ती यात्राहरू अनुकूलन मार्फत? तपाईं यी अनुमान गर्न पनि सक्नुहुनेछ - १%,%%, १०%, एस्टेरा केवल राजस्व अवसर कल्पना गर्न। त्यसले तपाईंलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट औचित्य प्रदान गर्न सक्छ।
तपाईं आफ्नो उद्योगमा अन्य कम्पनीहरूको अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ र केहि मार्केटि ve स्वचालन विक्रेताहरूबाट प्रयोग मामिलाहरूको समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। यो याद गर्नुहोस्, यद्यपि, मार्केटिंग अटोमेसन प्लेटफर्महरूले विनाशकारी कार्यान्वयनहरू प्रकाशित गर्दैन - केवल आश्चर्यजनकहरू! सहि प्लेटफर्म फेला पार्न काम गर्दा नुनको अन्नको साथ नम्बरहरू लिनुहोस्।
अर्को शब्दहरुमा, तपाईले कहिल्यै प्लेटफर्म किन्नु भन्दा पहिले तपाईका सबै रणनीतिहरू राख्नु पर्छ र कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुपर्दछ! धेरै घर बनाउने जस्तो छ… तपाईसँग ब्लूप्रिन्ट हुनु पर्छ पहिले तपाईं उपकरणहरू, निर्माणकर्ताहरू, र आपूर्तिहरू निर्णय गर्नुहुन्छ! जब तपाईं हाम्रो रणनीतिहरूलाई सफलतापूर्वक म्याप गर्नुहुन्छ, तपाईं प्रत्येक मार्केटि auto स्वचालन प्लेटफर्मको मूल्या strategy्कन गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यस रणनीति बिरूद्ध प्लेटफर्महरू चिन्न जहाँ तपाईं सफल हुनुहुनेछ। हामी कम्पनीहरूसँग अधिक विफलताहरू देख्छौं जसले प्लेटफर्म खरीद गर्छन् र प्लेटफर्मको कमिहरू समायोजन गर्न उनीहरूको प्रक्रिया बदल्न प्रयास गर्छन्। तपाईं प्लेटफर्म चाहानुहुन्छ जुन कम विघटनकारी हो र तपाईंको संसाधनहरू, प्रक्रियाहरू, प्रतिभा, समय, र लगानीमा पछाडि फर्काउनेमा समायोजित।
हामी संदर्भको लागि तपाईंको प्लेटफर्म सोध्न स्किप गर्न हामी सिफारिश गर्दछौं र केवल ग्राहकहरू पत्ता लगाउन अनलाइन जानुहोस्। प्रयोगका मामिलाहरूको रूपमा, सन्दर्भहरू प्रायः हातले लिइएको र सबैभन्दा सफल ग्राहकहरू हुन्। तपाईको औसत ग्राहकलाई कुन स्तरको सेवा, समर्थन, रणनीति, एकीकरण, र नवीनता तपाईंको मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफर्मले तिनीहरूलाई प्रदान गर्दैछ भन्ने हेर्न पुग्न र अन्तर्वार्ता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। सजग हुनुहोस् कि तपाईं केहि डरावनी कथाहरू सुन्न लाग्नुहुन्छ - प्रत्येक मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफर्ममा तिनीहरू हुन्छन्। तपाईंको स्रोतहरू र उद्देश्यहरू तपाईंको प्रत्येक सन्दर्भसँग तुलना गर्नुहोस् कि यसले तपाईंको सफलता वा असफलताको भविष्यवाणी गर्न सक्छ वा सक्दैन।
हामीसँग एउटा ग्राहक एकीकृत छ र केवल digit-अंकको प्लेटफर्म लागू गर्दछ केवल उनीहरूको विश्लेषक क्वाड्रन्टमा आधारित। जब प्लेटफर्म थियो सुरु गर्न को लागी तयार छ उनीहरूसँग कुनै रणनीति थिएन, सामग्री थिएन, र वास्तविक अभियानको सफलता मापन को कुनै साधन थिएन! तिनीहरूले निश्चित गरे कि तिनीहरूसँग प्लेटफर्ममा केहि नमूना अभियानहरू छन् जुन उनीहरू सजिलै अपडेट गर्न र पठाउन सक्दछन्… होइन। प्लेटफर्म खाली शेलको रूपमा सुरू भयो।
प्लेटफर्मको साथ सment्लग्नतासँग कुनै रणनीतिक स्रोतहरू थिएनन्, कि त केवल ग्राहक समर्थनलाई प्लेटफर्म प्रयोग गर्नमा। कम्पनी बाहिर गए र आफ्नो ग्राहकहरु को लागी व्यक्तित्व अनुसन्धान प्राप्त गर्न को लागी, ग्राहकहरु को यात्रा को विकास गर्न मद्दत गर्न परामर्शदाताहरु भाडा, र त्यसपछि परामर्शदाता संग काम गर्न र अभियानहरु लाई सुधार र सुधार गर्न को लागी थियो। उनीहरू आश्चर्यचकित भए कि पहिलो अभियानको विकास र कार्यान्वयनको लागतले सम्पूर्ण प्रविधि कार्यान्वयनलाई ओझेलमा पारे।
टैग: अधिग्रहणमार्केटिंग स्वचालनअवधारणupsellविक्रेता चयन
मोनिका Ambrozowicz (@m_ambrozowicz)
डिसे 30, 2016 मा 9: 39 AM
यी सुझावहरूको लागि धन्यवाद, तिनीहरू सबै धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। मार्केटिङ स्वचालनले उत्कृष्ट परिणाम ल्याउन सक्छ, तर क्लाइन्टहरू सचेत हुनुपर्छ कि यो एक उपकरण हो र यसले रणनीति र सामग्री बिना काम गर्दैन। यसैले यो प्लेटफर्म छनोट गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ जसले अभियानहरू सेटअप गर्न जटिल समर्थन प्रदान गर्दछ। म Synerise सिफारिस गर्न चाहन्छु, जुन यस्तो प्लेटफर्म हो। ग्राहकहरूले सबै सुविधाहरूमा पहुँच मात्र प्राप्त गर्दैन, तर प्रशिक्षण, मद्दत र सुझावहरू पनि पाउँछन्।